Ny sisa amin’ny loza dia namely ny Ejipsianina irery ihany, fa tsy ny Israelita. Ny loza fahefatra dia lalitra vaventy izay nameno ny tranon’ny Ejipsianina rehetra. Ny loza fahadimy dia tamin’ny biby. Biby fiompy sy ondry ary osy maro an’ny Ejipsianina no maty.
Hizara Hizara Ny Loza 10
my tant. 32